सुशिला विश्वकर्मा ,
प्रकाशित: २०७७ वैशाख ७, आइतबार
कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले बिश्व नै अक्रान्त बनेपछि राजधानीमा रहेका हरेक मानिसको दिनचर्या फेरिएको छ । दैनिकजसो काममा तल्लिन हुने मान्छेहरु सदाको जस्तो हतारोमा देखिदैनन् । त्यस्तै छन शहरका गल्लिहरु । जहाँ २४ सै घण्टा बज्ने सवारी साधनको संगीतमय धुन हराएको छ । मान्छेहरुमा नैराश्यता छाएको छ । मौन निन्द्रामा रहेको दुधे बालक जस्तै निदाएका छ्न सडक ,गल्लि,चोकहरु । शहर छिरेका अधिकांश मानिसहरू लकडाउन अगाडी नै घर फर्किंसकेका छ्न । आफ्नो मजबुरीले रोकिएकाहरु पनि शहरमा बिहान बेलुकी छाक टार्न धौ हुन लागेपछि पोका पतेरा सहित बालबच्चा लिएर पैदल यात्रा तय गर्न थालेको खवरहरु सामाजिक संजालमा विरलै पाइन्छ ।
भाइरसको महामारी कहिले सकिएला ? वसन्त ऋतुको हरियाली वातावरणमा कहिले रमाउने होला ?पिंजडा बाट निस्किएको सुगा जस्तै खुल्ला हावामा कहिले रमाउने होला ? वसन्त ऋतुमा फुलेका रंगीन बगैंचामा साथिभाइ सग गफिदै कहिले डुल्ने कहिले होला ? बानेश्वर्, माइतिघर्, तिनकुने, बबहरमहलका सडक छेउछाउमा आरु फुल्दा देखिने मनमोहक दृष्य कस्तो भयो होला ? दिनदिनै भेटेर चिया र चटपटेसग गफिने साथि कहिले भेट्ने होला ? हिउ जस्तै जमेर थुप्रिएको दैनिकी कहिले नदीजस्तै कञ्चन भएर बग्ला ? कोरोना भाइरसलाइ विश्व मानव जगतले जितेको जितेको दिन कसरि उत्सव मनाइएला ? यस्तै यस्तै प्रश्नले मन भरिन थालेको छ ।
मानव जगत नै सबैको प्यारो हुने भएर होला बसन्त ऋतुको यो मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य पनि कोरोना भाइरसको कारण मृत्युपछि शोकमा डुबेको घर जस्तै उदास उदास भएँको छ । सडकपारिको जीवन साँच्चै कष्टकर हुने रहेछ ।
त्यहीं भएर होला सुनसान देखिने सडक, बजार , चोक, गल्लि पनि लकडाउन खुल्ने समय कुर्दै गरेका मान्छे जस्तै बिछिट्टै अतालिएको जस्तै देखिन्छ । विज्ञानले चमत्कार गरेकोे कोरोना भाइरसले आकुल ब्याकुल नै बनाएको छ । यतिबेला बिश्वको करोडौँ मानिसको मानसपट्लमा कहिल्यै नमेटिने गरी बसेको छ ।
त्यतिमात्र होइन बाल्बच्चाहरुले समेत क्वारेन्टाइन्मा बस्नुपर्छ बाहिर जान हुँदैन कोरोना भाइरस सर्छ लकडाउन भएँको छ भन्ने भएका छ्न । जीवनमा यति धेरै थकाइ मार्ने समय सायदै कसैलाइ थिएन होला । मोबाइल फेसबुक युट्युव हेर्ने समय निकल्न धौ धौ थियो होला तर लकडाउनले त्यो समय जुराइदिएको छ ।
यदि सामाजिक संजालमा मोबाइल इन्टरनेट टेलिभिजन हुदैनथ्यो भने यो समयमा कोरोना भाइरस भन्दा पनि बढी बन्द कोठाभित्र डिप्रेसन भएकाहरु कति हुन्थे होलान् कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । यो महामारीले गरिब विपन्न श्रमिक मजदुरले जसोतसो पाएको मजबुरी लुटिएको छ ।
दैनिक ज्याला मजदुरि गरेर दैनिकी टार्दै आएकाहरुमा रोगले भन्दा भोकबाट कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । लकडाउन खुल्ने समय कुर्दै बसेका मानिसहरू सरकारले थप्दै गएको लकडाउनको कारण बिहान बेलुका खुल्ने गरेकोे किराना पसल, तरकारी पसलहरुमा दिक्क मान्दै खानेकुराको जोहो गर्नेहरु थुप्रै देखिन्छन् । हरेक दिन सवारी साधनको आवाजले कोलाहल बनेको जस्तो देखिने शहर
शहरका चोकहरु टक्क रोकिए जस्तै सुनसान बनेका छ्न । विडम्बना कोरोना भाइरस बाट बच्न बिश्व नै लकडाउन भइरहदा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । लकडाउन सुरु भएँको २६ दिन पुरा हुँदा नेपालमा कोरोना सक्रमित संख्या ३१ पुगेको छ । तर बिश्वमा भइरहेको सक्रमण र मृत्युलाइ आकलन गर्ने हो भने नेपाल अनि हामी नेपालि साँच्चै भाग्यमानी रहेछौ ।
जसको कारण अहिलेसम्म कसैले मृत्युवरण गर्नु परेको छैन । कोरोना सक्रमित उपचार गरिरहेका दुइ जना उपचारपछि अस्पतालबाट घर फिर्ता भएसकेका छ्न । यद्यपी यो अवस्थालाइ लिएर खुसि हुने अवस्था भने छैन । पछिल्लो केही समय को अवस्थालाइ नियल्ने हो भने नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
चिनको उहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले बिश्व लकडाउन भईरहँदा नेपाल सरकारले तीन हप्तादेखी राष्ट्रब्यापी लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ । यो अवस्थामा सेवरुपी भावना लिएर बिभिन्न राहत प्याकेज लिएर जुटेका सामाजिक अभियान्ता सुरक्षाकर्मि, स्वास्थकर्मि, सञ्चारकर्मीप्रति आभार छ । बिज्ञानले यति धेरै फडको मारेको बिश्वमा कोरोना भाइरसले गर्दा बिरालोले खेदेको मुसो जस्तो भएर दुलो भित्र बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएँको छ ।
यतिबेला कोरोना भाइरस बिश्वभर रहेका ७० करोड मानिसमा मानव सभ्यताको धावा बनेर उभिएको छ । जसलाइ केही गर्न सकिएको छैन । मुठ्ठि कसेर घरभित्र बस्नु बाहेक केही विकल्प निस्किएको छैन । सिङ्गो मानव सभ्यता जोगाउनकै निम्ति आत्मबल लिएर कोरोनासगको युद्ध जित्न सबैले आ आफ्नो ठाउबाट लाग्नु पर्ने चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । यो चिन्ता लिने समय होइन । यो युद्धको मैदान हो । उच्च मनोबलको साथ अगाडि बढ्ने बेला हो ।
कोरोना भाइरस र मानव जातिको युद्ध हो । साहस भए जस्तोसुकै युद्ध पनि जित्न सकिन्छ भने जस्तै डर चिन्ता र भय बाट दुर रही अनुशासन पालना गरेर केवल लकडाउनको पालना गर्नु नै युद्धको मैदानमा मृत्युलाइ हार साबित गर्नु जत्तिकै हुनेछ ।